WINDOWS 10 BUYEKEZA I-KB5000802 IBAMBE AMAHORA WOKULANDA? NAKHU UKUTHI UNGAYILUNGISA KANJANI - I-WINDOWS 10
Windows 10 buyekeza i-KB5000802 ibambe amahora wokulanda? Nakhu ukuthi ungayilungisa kanjani
Ukubuyekezwa kwe-Microsoft Drop okujwayelekile kwe-Windows ngezici ezintsha, ukuthuthukiswa kokuphepha, nokulungiswa kwamaphutha Ukulungisa umgodi wokuphepha owenziwe izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni. Windows 10 isethwe ukulanda nokufaka amawindows updates ngokuzenzakalela. Ngakho-ke Noma nini lapho izibuyekezo ezintsha zitholakala windows buyekeza ukuzilanda uqobo. Kepha kwesinye isikhathi ngenxa yamafayela wohlelo olonakele noma esinye isizathu amawindi abuyekeza ukulanda ukuvuselelwa isikhathi eside. Uma uthola ukuthi ifayela lakho le- Windows 10 Vuselela i-KB5000802 unamathele ukulanda izibuyekezo ku-0% noma esinye isibalo ku Windows 10, lapha sinezisombululo ezisebenzayo zokulungisa lokhu.
Okuqukethwe umbukiso 1 Isibuyekezo seWindows sinamathele ekulandeni 1.1 Hlola izilungiselelo zesikhathi nesikhathi 1.2 Bheka isevisi yokuvuselela iWindows isebenza 1.3 Sebenzisa Ithuluzi Lokuxazulula inkinga le-Windows 1.4 Setha kabusha mathupha ingxenye yokubuyekeza amawindi 1.5 Lungisa amafayela wohlelo lwe-Windows olonakele 1.6 Faka izibuyekezo ngesandla
Isibuyekezo seWindows sinamathele ekulandeni
Okokuqala, qiniseka ukuthi unokuxhumeka okuzinzile kwe-Intanethi Ukulanda amafayela wokuvuselela kusuka kwi-Microsoft Server.
Bheka noma iyiphi i-Software Security ayibangeli inkinga, noma Khipha ngokuphelele uhlelo lwe-antivirus noma olunye uhlelo lokuphepha kusuka kusistimu yakho.
Yenza i- ibhuthi ehlanzekile bese uhlola izibuyekezo, ezingalungisa inkinga uma kukhona ukungqubuzana kwensizakalo yomuntu wesithathu okubangela ukuthi ukubuyekezwa kwamawindi kubambeke.
Hlola izilungiselelo zesikhathi nesikhathi
Futhi, izilungiselelo zesifunda ezingalungile zidala ukwehluleka kwe-Windows. Qiniseka ukuthi izilungiselelo zakho zezifunda nolimi zilungile.
Ungahlola Futhi Uwalungise Kusuka Amasethingi
Chofoza Isikhathi nolimi
Bese Khetha Isifunda Nolimi kusuka kuzinketho ngakwesobunxele.
Lapha Qinisekisa ifayela lakho le- Izwe / Isifunda silungile kusuka ohlwini lokudonsela phansi.
Bheka isevisi yokuvuselela iWindows isebenza
Cindezela iWindows + R, thayipha izinsizakalo.msc futhi kulungile
Lokhu kuzovula ikhonsoli yezinsizakalo zewindows,
Skrolela phansi bese uhlola insiza yokuvuselela iWindows iyasebenza.
Futhi chofoza kwesokudla kwinsizakalo yokuvuselela iWindows khetha ukuqala kabusha.
Sebenzisa Ithuluzi Lokuxazulula inkinga le-Windows
Noma kunini lapho ubhekana nezinkinga zokufaka iWindows. Qalisa isixazululo sokuxazulula inkinga se-Build in Windows, lokhu kuzothola futhi kulungise izinkinga ezivimbela ukubuyekezwa kwamawindows ukufaka.
Cindezela isinqamuleli sekhibhodi yeWindows + I ukuvula uhlelo lokusebenza lwe-Izilungiselelo,
Chofoza ku-Update & security bese uxazulula inkinga
Lapha ngakwesokunene khetha ukuvuselelwa kweWindows bese uqhafaza ukuqhuba isixazululi nkinga
Lokhu kuzothola futhi kulungise izinkinga ezivimbela ukufaka izibuyekezo
Bheka isibuyekezo seWindows nezinsizakalo zayo ezihlobene ezisebenzayo,
Futhi, setha kabusha ingxenye yeWindows Update kube okuzenzakalelayo okungenzeka ukuthi kusiza ukulungisa windows ukubuyekeza izinkinga.
Setha kabusha mathupha ingxenye yokubuyekeza amawindi
Uma usese nenkinga ngemuva kokusebenzisa isixazululi nkinga, ukwenza izenzo ezifanayo ngesandla kungasiza lapho isixazululi sezinkinga singazange sikwenze. Ukususa amafayili okulondolozwa kwamafasitela ngesinye isixazululo esingahle sikusebenzele.
Vula i-Command Command njengo-Administrator bese uthayipha imiyalo engezansi ngakunye bese ushaya u-Enter ukuze usebenzise.
net stop wuauserv Ukumisa Isevisi Yokuvuselela iWindows
ama-net stop bits Ukumisa isevisi yokudlulisa ehlakaniphile engemuva.
Manje Iya ku C:> Windows> SoftwareDistribution> Ukulanda bese ususa wonke amafayela angaphakathi kwefolda.
Kungakucela imvume yomlawuli. Inike, Ungakhathazeki. Akukho lutho olubalulekile lapha. Ukuvuselelwa kweWindows kuzophinda kudinge lokho okudingayo ngokuzayo lapho uyisebenzisa.
* Qaphela: Uma ungakwazi ukususa ifolda (ifolda esetshenziswayo), qala kabusha ikhompyutha yakho ku- “ Imodi ephephile ”Bese uphinda inqubo.
Manje hambisa kumyalo we-oda bese uqala kabusha amasevisi amisiwe kulolu hlobo olungezansi uyala ngamunye bese ucindezela ukhiye wokungena.
ukuqala kwenetha wuauserv Ukuqala Insiza Yokuvuselela iWindows
amabhithi okuqala wenetha Ukuqala isevisi yokudlulisa ehlakaniphile yangemuva.
Lapho insiza isiqalile kabusha, ungavala i-Command Prompt bese uqala kabusha iWindows.
Nikeza enye iWindows Update futhi ubone ukuthi inkinga yakho isilungisiwe yini.
Uzokwazi ukulanda futhi ufake izibuyekezo ngempumelelo.
Lungisa amafayela wohlelo lwe-Windows olonakele
Umyalo we-SFC yisixazululo esilula ukulungisa ezinye izinkinga ezihlobene namawindows. Uma ngabe kukhona amafayela wesistimu alahlekile noma owonakele enza inkinga Isihloli sefayela lesistimu uma kusiza kakhulu ukulungisa.
ungabuyisa kanjani emuva isibuyekezo windows 10
Ekuqaleni cinga uhlobo lwe-CMD bese usebenza njengomphathi lapho umyalo we-oda uvela.
Lapha thayipha umyalo SFC / SHINTSHA bese ushaya ukhiye wokungena ukwenza umyalo.
Lokhu kuzoskena uhlelo lwakho kuwo wonke amafayela alo abalulekile wohlelo, bese kulufaka lapho kudingeka khona.
Linda kuze kube yilapho iWindows iskena futhi ilungisa amafayela wesistimu.
Lapho ukuhlolwa kwefayela lesistimu nokulungiswa sekuqediwe, qala kabusha ikhompyutha yakho
Manje hlola izibuyekezo zamawindows kusuka kuzilungiselelo -> ukuvuselelwa nokuphepha -> hlola izibuyekezo.
ngiyethemba ukuthi lesi sikhathi sifaka izibuyekezo ngaphandle kwenkinga.
Isibonelo, i-KB5000802 ingeyakamuva yamadivayisi asebenzayo Windows 10 inguqulo 20H2 kanye nohlobo 2004.
Lokho konke ngemuva kokufaka izibuyekezo mane uqalise kabusha ikhompyutha ukusebenzisa izinguquko. Futhi uma uthola iwindows Update ibambekile ngenkathi inqubo yokuthuthuka isebenzisa nje isikhulu ithuluzi lokudala imidiya ukuthuthukisa windows 10 inguqulo 1909 ngaphandle kwephutha noma inkinga.
Lezi yizixazululo ezisebenza kahle kakhulu zokulungisa amawindows updates anamathele ekulandweni, amawindows updates abhajwe nganoma yisiphi isikhathi isikhathi eside kumakhompyutha we-windows 10. Ngiyethemba ngemuva kokufaka lezi zixazululo windows ukubuyekeza izinkinga zokufaka zizolungiswa. Noma kunjalo, unanoma yimuphi umbuzo, isiphakamiso mayelana nokufakwa kokuvuselelwa kwamawindows Zizwe ukhululekile ukuxoxa ngamazwana. Futhi, funda:
Ungakusebenzisa Kakuhle Kanjani Windows 10 Ukusebenza Kwemidlalo
I-iTunes ayisebenzi ku-Windows 10? Nakhu ukuthi ungayilungisa kanjani
iphrothokholi yokuqinisekisa ekhethiwe ayivunyelwe
ungasetha kanjani kabusha isitolo seMicrosoft
amawindi 8 anamathele ekwamukelweni
chromecast awekho amadivayisi atholakele amawindi
intambo inamathele ephutheni lomshayeli wedivayisi
i-vpn inqamula amawindi e-inthanethi 10